Allgedo.com » Marka Guurka Laguu Diido! – By Aadam Abdi Abuzuhri
Marka Guurka Laguu Diido! – By Aadam Abdi Abuzuhri
By Adam Abdi Abuzuhri abuzuhri1@gmail.com
Waad salaamantihiin walaalaha qeymaha badan ee kuxiran websitekan qaaliga ah. Maanta iyo maqaalkeena wuxuu kusaabsanyahay caado aad u fool xun Quursi oo ubaahan in la’iska kaashado cirib-tirkeeda.
Waa qofka oo isku qanciyo inuu qofka kale kaga fiicanyahay isir, midib, diin, qaabka Allah usameeyey, lab iyo dhadig kuu yahay!
Sagaashamaadkii ayaan kaqeybgaley aaska hooyo Soomaaliyeed oo kugeeriyooday magaalada Nairobi ee wadanaka Kenya! Waxaa qabriga isku tuuray nin dheer oo sitay funaanad ay kuqorantahay “Quursigu qiil maleeyahay” si’uu iilka udhigo meydka! Waxaa la’igu sheegey inuu ahaa wiilkeeda oo ushaqeeya BBCda, laanta afka Soomaaliga. Inkasta oo aan hortaagneyn meyd iyo mowqif kuxasuusinaya Aakhiro, hadana hadalka funaanada kuqornaa wuxuu igu reebey xasuus!
Inta aad dad lanooshahay waayi maysid wax geeska kugaliya oo kudareensiyo inaadan lasineyn. Waxaa laga yaaba inaad iska cafiso qof kugu faquuqay qaabka Allah kuu sameeyey, sida isagoo kugu ceebiyo inaad jiistahay, ra’yigaadu qaldanyahay ama isu arko inuu kaafanyahay maadama uu lacag leeyahay laakinse aadan waxweyn kasoo qaadin oo aad halgan noolasha sii wado.
Waa su’aalo aan tafsiir laheyn! Waxaase hubaal ah qofka sidaas lagu sameeyey inuu ciil qabo, kana fikirayo sidii uu ku aar-goosanlahaa! Su’aasha waxay tahay ‘tolow muxuu samayn karaa?’
Inkastoon qurbaha noloshayda ku qaatay somali kalama kulmin wax takoora lakiin dalkan aan deganahay waan kala kulamay oo waxaan la saftay nin madaw oon filayo inusan muslim ahayn; wuxuu ahaa ciyaartoy; waxaana lagu colaadiyey midabka oo waxaa lagu yiri adoon (عبد).
Waxaan kutalin lahaa salaadiint soomaliyee dhamaantood intay isu yimaadan goor ay cedeedu kulushahay oo duhur ah, inta kabaha bixiyeaan ay raaligelen ka bixiyaan dulmigaas si toos (live) looga daawanaayo televisionada.
Intaan markale kulmidoona waa walaalkiin Aadam Abdi Abuzuhri oo idinleh Assalaamu Alaykum. Wixii talo iyo tusaale ah abuzuhri1@gmail.com.
Qormooyinkii hore ee Adam Abuzuhri link-iga hoose ka eeg:
Ilma adeerayaalow, Cali Raage haka raacina Nabiga Ilaahey
Dagaalkii 77 ayaa la’i qabtay anigoo 13 jir ah – Q.1aad